အရင်ခေတ်က မထွန်းကားခဲ့တဲ့ ခေတ်သစ် Beauty Trend များ
12 Jul 2019 . 4:30 PM
အလှပြင်ပစ္စည်းတွေဟာ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ ခေတ်တွေ တစ်ခေတ်ပြီးတစ်ခေတ် ပြောင်းလဲလာသလို အလှပြင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ ပစ္စည်းတွေလည်း ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ ဒီလိုပဲ အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီး အလှပြင်နေရုံနဲ့ မပြီးတော့ပါဘူး။ လှအောင်လို့ နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့တခြားနည်းလမ်းတွေလည်း ရှိလာပါပြီ။ ခေတ်နောက်ကျမကျန်နေရအောင် အမီလိုက်ရပါလိမ့်မယ်နော်။ ဒီပစ္စည်းတွေက ဘာတွေများလဲ။ တစ်ခါတလေ ကိုယ်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြင်တွေ့နေရပေမယ့် မေ့နေကြမှာဆိုးလို့ ပြန်လည်ပြောပြပါရစေနော်။
မျက်ကပ်မှန် (Contact Lens)
အရင်တုန်းကတော့ မျက်ကပ်မှန်တွေကို ကျန်းမာရေးအရပဲ သုံးစွဲခဲ့ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ မျက်ကပ်မှန်ဟာ အလှပြင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပေါင်းစုံနဲ့ လှပတဲ့မျက်ကပ်မှန်တွေ ပေါ်လာသလို မိန်းကလေးတွေရော၊ ယောက်ျားလေးတွေပါ တပ်ကြတာပါ။ သူက မျက်ဝန်းအလှကို ပံ့ပိုးပေးပြီး မျက်လုံးကို ဆွဲဆောင်မှုရှိစေလို့ပါ။
တက်တူးကလည်း တဖြည်းဖြည်း အလှအပပစ္စည်း ဖြစ်လာပါပြီ။ လူငယ်တော်တော်များများဟာ အရင်ခေတ်ကလို တက်တူးကိုနှစ်သက်လို့ ရေးဆွဲကြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အလှအပအဆင်အယင်တစ်ခုလို သဘောထားပြီး ရေးဆွဲလာကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပွဲလမ်းသဘင်သွားရင် အလှပြင်သလိုမျိုး ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာပေါ်က တက်တူးတွေကို ဖော်ပြထားရတာကလည်း အလှအပတစ်မျိုးပါပဲ။
ကိုယ်ခန္ဒာအစိတ်အပိုင်းကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း (Plastic Surgery)
အရင်ခေတ်တုန်းက ခွဲစိတ်တယ်ဆိုတာ ရောဂါကြီးကြီးမားမားဖြစ်မှပါ။ ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ထုံဆေး၊ မေ့ဆေးပေးပြီး ခွဲစိတ်ရတာကို ကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။ မလွဲရှောင်သာအခြေအနေမှသာ ခွဲစိတ်မှုတွေကို ပြုလုပ်ကြတာပါ။ အခုခေတ်ကတော့ မတူတော့ပါဘူး။ အလှအပအတွက် မျက်ရစ်ခွဲဖို့၊ Botox ထိုးဖို့၊ နှာခေါင်းပြုပြင်ဖို့ အစုံပါပဲ။ အလှအပအတွက် ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေကိုလုပ်နေကြပါပြီ။
Contour လို့ခေါ်တဲ့ မျက်နှာပုံဖော်တာဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ မိတ်ကပ်ပုံစံတစ်မျိုးပါပဲ။ နှာခေါင်းလေးတွေ၊ မေးရိုးလေးတွေကို Shape ချပြီး ပုံမဖော်ဘဲ လိမ်းထားတဲ့ မိတ်ကပ်ကို မိတ်ကပ်အပြည့်လိမ်းတယ်လို့တောင် မခေါ်တော့တဲ့ ခေတ်ကို ရောက်နေတာပါ။ အခုခေတ်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လှပတဲ့အစိတ်အပိုင်းကို ပုံဖော်ပြီး မလှပတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖုံးအုပ်ဖို့အတွက် ပန်းချီဆွဲသလို အသေးစိတ်ပုံဖော်လာပါပြီ။
ကဲ ဒီတော့ ခေတ်မီဖို့အတွက် ဒီလို ရှေ့ကပြေးနေတဲ့ အလှအပ Trend တွေကို အမီလိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။ မသိလိုက်နဲ့ မလုပ်တတ်မရှိရလေအောင် တီးခေါက်ကြည့်ပါဦး။ ကိုယ်တွေလည်း လှဖို့ပဖို့ လိုက်လုပ်ရဦးမယ်လေနော်။
by Ngul Ciin . 59 mins ago